Iko kushandiswa kweMautic. Otomatiki kushambadzira mabasa | Linux Vakapindwa muropa
Iko kushandiswa kweMautic. Otomatiki kushambadzira mabasa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Zvirongwa
Iko kushandiswa kwe Mautic es imwe nzira yakanakisa kana uchitsvaga maturusi ekushambadzira zviitiko zvekushambadzira. Kugamuchirwa pane yedu server Inotsemuka zvakakwana uye inokodzera vese mahara mahara uye makambani ehukuru hwese.
Ichi chinyorwa chikamu chezvakateedzana. Pakupera iwe unowana rondedzero ine zvinongedzo kune zvimwe zvinyorwa.
Kugadzira ipfupi pfupiso yemamwe maviri matumira, tinogona kutaura kuti kushambadzira otomatiki mabasa ane chimwe chinhu chakafanana nehove. Iwe unopa hoko kune vatengi kuti vashanyire peji. Kana vakushanyira uvape chimwe chinhu kuitira kuti mukudzoka vakupe data ravo. Kana ivo vachikupa yako data, iwe unovashandisa kuti uwane zvimwe pamusoro pemunhu iyeye uye upe kumwe kupihwa. Kana vachida kubvumirana iwe wakagadzirira kuvatengesera chimwe chinhu chaunoziva kuti vanoda kutenga. Ehezve kuita izvi nemaoko kunotora nguva yakawanda, saka zviri nyore kurega Mautic aite basa racho.
Izvo zvinhu zviviri zvine chekuita nekudyidzana nevatengi zviri kumhara mapeji uye kurodha mapeji.
Muzvinyorwa zviviri zvekutanga takataura zvakawanda nezvekumhara mapeji, ndeavo kune vangangotarisirwa vatengi vanoendeswa nechikurudziro chekuzadzisa chimwe chinhu. Ikoko iwe unowana fomu iyo inokutendera iwe kuti utore yako data.
Kune imwe mhando yepeji rinova iro rekurodha peji. Mukutsinhana nedata ravo, iwe unovapa iwo mukana wekuve nekuwana kune zvemukati zvinogona kuve mabhuku, mabhuku ekuteerera, mavhidhiyo, makosi kana chero zvimwe zvemadhijitari zvemukati.
Mautic inoita kuti zvive nyore kugadzira ese maviri marudzi emapeji kudhonza nekudonhedza kana kushandisa matemplate. Iwe unogona zvakare kugadzira yako nekunyora kodhi kana kuitenga pamusika.
0.1 Chirevo chizvarwa
1 Mautic mabhenefiti pane dzimwe nzira dzekutengesa
2 Index kune akateedzana nezvekushandiswa kweMautic
Kushambadzira otomatiki kunoda mhinduro nguva dzose. Kunyanya kana uchitanga mushandirapamwe zvinodikanwa kuti uzive chii chiri kushanda uye chii chisiri kuitira kugadzirisa. Asi kunyangwe danidziro painotora nguva yakareba, inogona kumira kushanda uye shanduko dzinogona kudikanwa.
Mautic inopa inotevera mishumo:
Mautic mabhenefiti pane dzimwe nzira dzekutengesa
Iwe unogona kupedzisa chikamu ichi nemazwi maviri: Donald Trump. Ichokwadi kuti pasocial network haina kufanana neyemusika yekushambadzira sevhisi. Asi, ndakapedza yakawanda yegore rapfuura ndichinyora kuti Google, Amazon kana Apple vakashatisa sei vakwikwidzi vavo sKuregeredza njodzi dzekusiya ruzivo nezve yangu mutengi data uye angu ekushambadzira nzira mumaoko echitatu bato.
Ndiri kureva, kana vakadzima maakaundi emukomana anobata zvombo zvenyukireya, hapana chiri kumisa mumwe munhu kutora vatengi vangu. Na Mautic, chete avo vane mukana weseva ndivo vanowana iyo data.
Zvikasadaro, iwo mutsauko wakafanana pakati pekuenda kuresitorendi kana kubika kumba. Muresitorendi iwe unofanirwa kugadzirisa izvo zviri pane menyu uye zvikamu izvo mubiki anoda kukushandira. Iwe unogona kugadzira mhando dzakasiyana dzemishandirapamwe zvinoenderana nezvinodiwa zveimwe purojekiti. Uye iyo mutengo unogara wakagara zvisinei kuti wakura zvakadii.
Zvinenge zvakajairika kutaura nezve mabhenefiti eakavhurika sosi, asi ichiri chokwadi.rto. Iwe unofunga nezve mangani masevhisi akamira kushanda mumakore ano? Ivo vangangodaro vanokupa iwe data kutama kune mumwe mupi, asi ichasarudzwa nemupi wako wazvino mupi.
Kuve yakavhurika sosi chirongwa, dai Mautic akarega kana kutora imwe kosi, nharaunda yacho yaizotarisira kugadzira forogo.
Imwe yakakosha mukana ndeyekuti iwe unogona kusarudza vako vega vanopa rubatsiro. Kwete chete sevha yewebhu chete, asiwo chikuva cheemail kana gedhi rekutumira mameseji eSMS kana WhatsApp.
Index kune akateedzana nezvekushandiswa kweMautic
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iko kushandiswa kweMautic. Otomatiki kushambadzira mabasa
Zoom iri kuvandudza email uye kalendari masevhisi
Twitter yakamisa zvachose nhoroondo yaDonald Trump